भेरीमा नर्स कुट्ने यी नेताले दाङमा एमालेकै महिला नेतृमाथि गरेका थिए बला'त्कार! - Sidha News
भेरीमा नर्स कुट्ने यी नेताले दाङमा एमालेकै महिला नेतृमाथि गरेका थिए बला’त्कार!
कोभिड–१९ को महामारीमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उपचारमा खटिएका नर्स र डाक्टरलाई कुट्ने एमाले कार्यकर्ता मानबहादुरको विगत राम्रो छैन । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ उरहरीका रावत यसअघि बला’त्कार मुद्दामा जेल परेका थिए । ०६६ मा देउखुरीकी एक महिलालाई बला’त्कार गरेको मुद्दामा डेढ वर्ष सजाय काटेर उनी जेलमुक्त भएको प्रहरीको रेकर्डबाट देखिएको छ ।